Coenzyme Q10 Powder (303-98-0) Ndị na-emepụta - Phcoker Chemical
Coenzyme Q10 (CoQ10), nke a makwaara dika ubiquinone ma obu coenzyme Q, bu enzyme nke emeputara
Coenzyme Q10 ntụ ntụ (303-98-0) video
Coenzyme Q10 ntụ ntụ (303-98-0) Smmezi
Chemical Aha CoQ10
Brand Name Coenzyme Q10 ntụ ntụ
Klaasị ọgwụ ọjọọ Mkpụrụ peptide na-eme agadi
molekụla Fnhazi C59H90O4
molekụla Wasatọ 863.34
Nkịtị Monoisotopic 863.365 g · mol-1
Mgbu Point 48 – 52 ° C (118 – 126 ° F; 321 – 325 K)
Ọkara Ndụ nke Ndụ 33 awa
Agba edo edo ma obu oroma siri ike
Sume Mmiri anaghị agbaze n'ime mmiri
Antinye • dị ka kọlọtọ na - ahụ maka ịmụba ihe ọkụkụ ya nke na - ahụ ihe na - egbochi ya
• dị ka ọkọlọtọ maka mmiri ọgwụ chromatography dị elu
• ịmụ maka etu esi emepụta oke bekee
• na cellular CoQ uptake assay
Gịnị bụ Coenzyme Q10 (NZC)
Coenzyme Q10 (CoQ10), nke a makwaara dị ka ubiquinone ma ọ bụ coenzyme Q, bụ enzyme emepụtara na ahụ mmadụ, nke a hụrụ na sel niile. Ọ gụnyere ọtụtụ ọrụ ndu gụnyere inye aka imepụta ike, na - egbochi radicals, yana idobe mkpụrụ ndụ abụọ n'ime ahụ yana anụ ahụ.
Otu ahụ na-eto eto nwere ikike ịmịpụta Coenzyme Q10 dị ka ọchọrọ. Ma, ihe dị iche iche dịka ịka nká na nrụgide nwere ike belata ọkwa Coenzyme Q10. N’ihi nke a, ike nke mkpụrụ ndụ na-agbanwe ma na -agide nrụgide na-ebelata.
N'ihi na Coenzyme Q10 jụrụ mmekọrịta na usoro ịka nká, a na-ahụta ya dịka otu n'ime ezi biomarkers nke ịka nká.
Coenzyme Q10 ntụ ntụ bụ odo na-acha odo odo ma ọ bụ oroma, ọtụtụ ndị dọkịta na ndị na-eme nchọpụta kwenyere na Coenzyme Q10 ntụ ntụ nwere ike inye aka na-agwọ ọtụtụ ọrịa ma nye aka na oke ibu. A na-eme nnyocha dị ukwuu banyere otu Coenzyme Q10 ntụ ntụ nwere ike isi nyere aka ịchọta ọgwụgwọ n'ọdịnihu maka ọtụtụ ọrịa. Enweelarị ihe akaebe na-atụ aro na enwere ike iji Coenzyme Q10 ntụ ntụ agwọ ọrịa:
Coenzyme Q10 ntụ ntụ nwere ike inyere aka mee ka ahụ gị dị obere ka ị nyere aka belata ibu.
Coenzyme q10 mmiri soluble ntụ ntụ uru
Nwepụta ike na cell ma nye aka dịka nkwado
Enyemaka ọgwụgwọ nke ọrịa obi
Ọrụ na-egbochi oxidation
Enyemaka iji gwọọ ọrịa Parkinson
Nọgide na-enwe goms ahụ ike
A na-eji 8.Coenzyme Q10 rụọ ọrụ iji mepụta ike achọrọ maka uto na ndozi sel.
Ejiri anụ ahụ 9.Coenzyme Q10 mee ihe dịka ọgwụ mgbochi na ịchọ mma.
Coenzyme q10 ntụ ntụ maka anụahụ
Coenzyme Q10 bụ ihe dị mkpa na-egbochi ịka nká maka anụ ahụ ike. Site na ime dị ka antioxidant siri ike, ọ na-eme ka ndị na-enweghị ihe ọ bụla iji nyere aka melite ihe ịrịba ama nke ịka nká. A na-akpọ Coenzyme Q10 ubiquinone ("ubiquitous quinone"), n'ihi na ọ dị na osisi na anụmanụ, gụnyere anụ ahụ mmadụ. Ihe a bu molekul di nkpa na iku ume. Ngwa ngwa ya na-eweghachite ọrụ mitochondrial, na-abawanye mmepụta ume dị ka ATP, yana ibelata ike achọrọ iji mee collagen ọhụrụ. Tinye Coenzyme Q10 ka ọkacha mmasị gị isi ude ma ọ bụ mmiri dabeere usoro maka antioxidant agbam ume.
Coenzyme Q10 dị mkpa maka nlekọta anụ ahụ. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepụta nke collagen na protein ndị ọzọ na-emejupụta matriks extracellular. Ọ bụrụ na etisasị ma ọ bụ debechaa akwara dị na mbụ, akpụkpọ ahụ ga-efunahụ ịdị na-agbanwe agbanwe, ịdị nwayọ, na ụda nke nwere ike ibute ndọkpụ na ịka nká. Coenzyme Q10 nwere ike inye aka mee ka anụ ahụ zuru oke ma belata ihe ịrịba ama nke ịka nká.
Site na ịrụ ọrụ dị ka ihe antioxidant na scavenger radical n'efu, Coenzyme Q10 nwere ike ịkwalite usoro nchebe anyị sitere n'okike megide nrụgide gburugburu. Coenzyme Q10 nwekwara ike ịba uru na ngwaahịa nlekọta anyanwụ. Ihe ngosiputa gosiputala Mbelata ahihia site na iji Coenzyme Q10 ruo ogologo oge na ngwaahịa nlekọta ahu.
A na-atụ aro Coenzyme Q10 maka ude, ude mmiri, serms mmanụ na ngwaahịa ịchọ mma. Coenzyme Q10 bara ezigbo uru na usoro mgbochi na ngwaahịa nlekọta anyanwụ.
Usoro ọgwụgwọ na coenzyme Q10-nwere usoro na-eme ka ọkwa Q10 nke anụ ahụ dị mma ma na-enyekwa antioxidative mmetụta. Knott A et al. Ihe nkedo. (2015)
Nsonaazụ nke nri coenzyme Q10 na anụ ahụ yana ọnọdụ: nsonaazụ nke ọmụmụ, na-achịkwa placebo, ọmụmụ ihe abụọ. Mitek K et al. Ihe ndu. (2017)
Nanoencapsulation nke coenzyme Q10 na vitamin E acetate na-echebe megide mmerụ ahụ mmebi anụ ahụ UVB na ụmụ oke. Pegoraro NS et al. Colloids Sọfụụ B Biointerfaces. (2017)